China Ultrasonic Copper Aluminium Conversion 20Khz 3000w Welding yeemoto kunye neTransformer yomvelisi kunye nefektri | Qianrong
I-Ultrasonic Copper Aluminium Conversion 20Khz 3000w Welding yeMoto kunye neTransformer
Into No QR-X2020A QR-X2030A QR-X2040A
Indawo yeWelding 0.5-16mm2 0.5-20mm2 1-30mm2
Uxinzelelo lomoya 0.05-0.9MPa 0.05-0.9MPa 0.05-0.9MPa
Rhoqo 20KHZ 20KHZ 20KHZ
I-Voltage 220V 220V 220V
Ubunzima bophondo 18KG 22KG 28KG
Ubungakanani bePhondo 530 * 210 * 230mm 550 * 220 * 240mm 550 * 250 * 240mm
Ubungakanani bejenaretha 540 * 380 * 150mm 540 * 380 * 150mm 540 * 380 * 150mm
I-Ultrasonic wire harness welding isebenzisa i-frequency-frequency vibration amaza ukuhambisa ngaphezulu kwezinto ezimbini zokucoca ii-workpiece ze-welding. Phantsi koxinzelelo, imiphezulu yeentambo zokubopha ii-wire workwork zihlikihliwe kunye ukwenza ukudibana phakathi kweendlela zeemolekyuli. Uncedo kukuba ikhawuleze kwaye yonge umbane. Amandla okuxuba aphezulu, ukuqhuba kakuhle kombane, akukho ntsimbi, kufutshane nokusebenza okubandayo; into engalunganga kukuba iinxalenye zesinyithi esidityanisiweyo akufuneki zibengqindilili (ngokubanzi zingaphantsi okanye zilingane no-5mm), amalungu adibeneyo akufuneki abe makhulu kakhulu, kwaye kufuneka acinezelwe.
I-ultrasonic wire harness welding ayifuni ukuhamba kunye nokufudumeza kwangaphandle, ayinakukhubazeka ngokushisa, ayinakho uxinzelelo olusalayo, kwaye ifuna unyango olungaphantsi kwe-weld ebusweni be-weldment. Hayi kuphela iintsimbi ezifanayo, kodwa naphakathi kweesinyithi ezahlukeneyo zinokudityaniswa. AmaSpredishithi okanye iifilamenti zinokudityaniswa kwi-slab. I-welding ye-Ultrasonic yeekhondaktha ezihamba kakuhle zombane incinci kakhulu amandla kune-welding yangoku kwaye isetyenziselwa ukuhambisa izinto ezikhokelela kwi-transistors okanye kwiisekethi ezihlanganisiweyo. Xa isetyenziselwa ukutywina i-welding yeziyobisi kunye nezixhobo ezinesiqhushumbisi, inokuphepha ukuwelda ngokubanzi kweziyobisi ezingcolileyo ngenxa yezinto ezichithakeleyo, kwaye ayizukuqhushumba ngenxa yobushushu. Kukusetyenziswa kwamaza e-ultrasonic ukuhambisa iingcingo zesinyithi. Iqukethe ibhokisi yamandla, i-transducer, umphathi womoya kunye nentloko yesixhobo. Ukongeza, izinto zolawulo ezinje ngee-hubs, izixhobo ezinqamlezileyo, kunye nee-microprocessors zibandakanyiwe. Ibhokisi yamandla iguqula umbane oqhelekileyo wangaphandle (~ 220V, 50 okanye 60Hz) ukuya kwi-20000Hz (20KHz), umbane ongaphezulu kwe-1 volt, emva koko ilawulwa yibhokisi yamandla ukuze ikhuphe kwaye isebenze kwi-transducer. I-transducer licandelo lombane elisebenza ngokukuko eliguqula amandla ombane abe ngamandla oomatshini. Xa kuthelekiswa neemoto eziqhelekileyo, kukho umahluko omkhulu phakathi kweetransducers: eyokuqala, itransducer iguqula amandla ombane abe kukungcangcazela okusemgceni endaweni yokujikeleza; Okwesibini, isebenza ngokufanelekileyo kwaye inokuguqula i-95% yamandla ombane. Emva kokuguqulwa yi-transducer, amandla oomatshini asetyenziswa kwintloko ye-welding. Uphondo lwe-ultrasonic lwenziwe nge-alloy titanium kwaye lwenziwe ngomatshini kubume obuthile ngokwemigaqo ye-acoustic yokuqinisekisa ukudluliselwa kwamandla okuphezulu.c
Xa umvelisi ekhupha i-alamu engaphezulu, kufuneka itshekishwe ngolu hlobo lulandelayo
1. Akukho vavanyo lomthwalo, ukuba ukusebenza ngoku kuqhelekile, kusenokwenzeka ukuba intloko ye-welding inxibelelana nento engafanele ichukunyiswe okanye uhlengahlengiso lweparameter phakathi kwentloko ye-welding kunye nesihlalo se-welding sinesiphene.
2. Xa uvavanyo lokungabikho komthwalo lungaqhelekanga, qala ujonge ukuba ngaba kukho ukuqhekeka entlokweni ye-welding, nokuba ufakelo luqinile, emva koko ususe intloko ye-welding kwaye wenze uvavanyo olungenamthwalo ukuphelisa ukuba kukho ingxaki nge uphondo oluhamba phambili, + kwaye luphelise inyathelo ngenyathelo. . Emva kokuphelisa ukubanakho ukusilela kwempondo ye-transducer +, endaweni yophondo olutsha ukumisela.
3. Ngamanye amaxesha kukho imeko apho uvavanyo lokungabikho komthwalo luqhelekileyo, kodwa alunakusebenza ngesiqhelo. Kungenzeka ukuba iinxalenye zangaphakathi zamandla e-acoustic ezinje ngokutshintsha kwentloko ye-welding, zikhokelela kukuhanjiswa kwamandla kwesandi okungalunganga. Nantsi indlela elula yokugweba: indlela yokubamba ngesandla. Intloko yentsimbi esebenzayo okanye uphondo umphezulu uyalingana xa usebenza, kwaye isandla siziva siveliveve egudileyo. Xa amandla esandi engagudanga, isandla siziva njengamaqamza okanye amaqhuma. Iindlela zokukhetha zisetyenziselwa ukuphelisa iindawo ezinengxaki. Imeko efanayo inokwenzeka xa umvelisi engaqhelekanga, kuba ngesiqhelo i-transducer input waveform kufuneka ibe sine wave egudileyo, enokuthi yenzeke kwakhona xa kukho ii-spikes okanye ii-waveform ezingaqhelekanga kwi-sine wave. Ngeli xesha, enye into yamandla e-acoustic ene-acoustic anokutshintshwa kukhethwe.
Egqithileyo Kwenziwe ngentando 3000 Watt Roll Ultrasonic Metal Welding for Flat Solar Cels Aluminium Copper Pipe Panel
Okulandelayo: Amandla angama-4200w ePhakamileyo angama-15Khz ye-Ultrasonic Plastik Welding Machine kunye neNkqubo yoLawulo lwexesha
Okrelekrele 15Khz Ultrasonic Generator yedijithali ...
3000W Frequency High 20Khz ye-Ultrasonic Copper okanye ...
Ukuqiniswa okuphezulu kwe-70Khz Zonke i-Digital Ultrasonic V ...
Uhlobo lwekholamu ye-30Khz 700w ye-Ultrasonic Transducer ...
Amandla aphezulu e-15Khz 2600w i-Ultrasonic Welding Trans ...